War deg deg ah: Hogaamiyhii Al-Qaacidada B/Afrika oo la sheegay Muqdisho lagu diley – SBC
War deg deg ah: Hogaamiyhii Al-Qaacidada B/Afrika oo la sheegay Muqdisho lagu diley
Wargeyska Daily Nation ee ka soobaxa dalka kenya ayaa maanta bogiisa hore ku soo daabacay in ninkii dhawaan ay ciidamada dowlada ku dileen Ex-control uu ahaa Fazul Abdullah, kaasi oo horay qaraxyo uga geystay Nairobi iyo dara salam.
Fazul Abdullah ayaa maalinimadii talada aroor hore waxa ay ciidamada XDS ay ku toogteen isaga iyo rag la socaday Ex-kontorol kadib markii ay isaga darsoontay wadaad uu u socday iyo halka uu joogo, sidaana uu dabin ugu dhacay.
Ciidamada Dowlada oo aan ninkan aqoon muuqaaleyd u laheyn ayaa ku dilay oo kaliyah amar diido uu sameeyay xili waaga uubaryayana ay eheyd, balsa Saraakiisha ciidamada XD somaliya ayaa sheeciyay in ay baaritaano ku wadaan cida ay yihiin iyo u jeedkoodii halka ay rabeen.
Wargeyska Nation oo si aad ah uga faalooday ayaa shegayn in ninkaasi iyo kuwo kale si aad ah ay u doon doonayeen iyagoo xitaa lacag dul dhigay soo qabashadiisa xili ay gacab ka helayaan FBI-da mareykanka.
Warkan sheegaya in uu ahaa dinka la dulay Fazul Abdullah ayaa waxaa xaqiijiyay taliya ciidanka boliska dalka kenya Mr. Mathew isagoo soo xigtay in ay faah faahin rasmi ah ka heleen wakiiladooda Muqdisho.
Fazul Abdullahi waxa uu heystaa sharciga dalka kenya waxa uuna ku dhashay magalada Moroni isagoo ku hadla luqadaha French, Swahili, Arabic iyo English, inkastoo ay wararka qaar raacinayaan in somaliga xitaa uu shaax ku cabi karo, taasi oo cadeyneya in hoygiisa ugu weyn uu ahaa dalka soomaaliya.
waan ku farax sanahay in nin kaasi la dilo waayo waxaa uu ahaa qodax somaliya ka baxday hadana hadii aanun ahay somali waxaanu haynaa wada noogu wanag san ee aaan ku heli karno xalka dalkayaga…